အဖိုးအို၊ မြင်းတစ်ကောင်နှင့် ဝေဖန်စကားများ | ZAYYA
← Dhyan သည် စိတ်၏ အလွန်
အဲ့လို ဝိုင်းပြော တော့ – အဘိုးအိုက – ငြင်းပယ် ပါတယ်။ “ခင်ဗျားတို့ ပြောတာ များလွန်းနေပြီ။ သိပ် ရှည်ရှည် ဝေးဝေး မယူလိုက် ကြပါ နဲ့။ အခု – မြင်းဇောင်း ထဲ မှာ မြင်း မရှိတော့ဘူး။ ဒါပဲ မဟုတ်လား ။ ဒါဆို – ဒါပဲ ပြောပါ။ မြင်းဇောင်းထဲမှာ မြင်းမရှိဘူး ဆိုတဲ့ အချက် က လွဲ ရင် ကျန်တာ ဟာ ခင်ဗျား တို့ အတွေးနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဆုံးဖြတ် ပြောဆို နေတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဖြစ်တာကို ကံဆိုးတယ် ၊ အခုဖြစ် တာ ကို ကံကောင်းတယ် လို့ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လို သိပြီး ဘယ်လို ဆုံးဖြတ် မှာတဲ့လဲ။ ခင်ဗျား တို့ ဘယ်နည်း ဘယ်လမ်းနဲ့ အပ်ကျမတ်ကျ ဘယ်လို ဝေဖန် ကြရတာ တဲ့လဲ”
ရွာသား တွေက – “ကျုပ် တို့ကို အရူး မလုပ်စမ်းပါနဲ့ အဘိုးကြီးရာ။ ခင်ဗျား ပြောတာတွေကို ဖြေရအောင် ကျုပ်တို့က ပညာရှိတွေ၊ ဘုန်းကြီး တွေ မဟုတ်ဘူး။ အခု ဖြစ် တာ ကို တွေးကြည့်ဖို့ ဘာများ ထွေထွေ ထူးထူး တွေးခေါ်ဖို့ လိုနေ သေးလဲ။ ခင်ဗျား ငွေတွေ အများကြီး ရ ဖို့ ရှိတာ ရှောင်လွှဲ ခဲ့တယ်။ အခု အဲ့ဒီ ငွေပေါက်ကြီး ပျောက်သွားပြီ။ ခင်ဗျား ကိုက – အသုံးမကျတာ မဟုတ်လို့ ဘာ ဖြစ်ရဦး မှာ လဲ။ ခင်ဗျား လို အသုံးမကျတာ မျိုး ဘယ်သူ ရှိမလဲ”
အဘိုးအို က – “ကျနော် ရိုးရိုး ပဲ ပြောပါမယ်။ မြင်းဇောင်း ထဲမှာ မြင်းမရှိဘူး၊ ဒါပဲ။ ဒါကလွဲရင် အခြား ကျနော် မသိဘူး။ ကံကောင်း တာ လား၊ ကံဆိုး တာလား ကျနော် ဝေဖန် နေစရာ မလိုဘူး။ အခု ဖြစ်တာဟာ ဖြစ်ရပ်လေး တစ်ခုပဲ။ အဲ့ဒီနောက်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်မယ် ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်မယ် ဘယ်သူ ဘယ်နည်း နဲ့ သိမလဲ၊ ကဲ ပြောကြ ပါ”
လူတွေ က ခေါင်း တစ်ခါခါ၊ လည် တစ်ခါခါ ရယ်မော ကြ၊ လှောင်ပြောင်သွား ကြတယ်။ ဒီအဘိုးကြီးကို အရူးပဲ လို့ တွေးထား လိုက်ကြ တယ်။ ဒါ ဟာ လူတွေ တွေးနေ ကျ ထုံးစံ လိုလို ဖြစ်နေပြီရယ်။ သူ့မှာ မြင်း တစ်ကောင် ရောင်း လိုက်ရုံနဲ့ ချမ်းသာနေပြီ ကို၊ သူမို့ ငြင်းဆန် ခဲ့တယ်။ အဲ့ အချိန် ကတည်းက သူ တော်တော် မိုက်မဲ နေပြီ လို့ သတ်မှတ် ပါတယ်။ အခု မြင်း လည်း မရှိတော့ဘူး – မြွေပါ လည်း ဆုံး ၊ သား လည်း ဆုံး၊ – ပိုက်ဆံ လည်း မရ၊ မြင်းလည်း ဆုံး။ သူ့လောက် မိုက်မဲသူ၊ သူ့လောက် ရူးသွပ်သူ ဘယ်သူမှ မရှိနိုင် ဘူး။ ဒါက လူတွေ ရဲ့ အထင်၊ အမြင် ဆုံးဖြတ် ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
အဘိုးအို ကတော့ သူ့ ရဲ့ ပုံမှန် နိစ္စဓူဝ အလုပ်တွေ ပုံမှန် လုပ်နေဆဲ။ ထင်းခွေတယ်။ တောဝင်တယ်။ အဘိုးအို အရွယ် ပင်ပင် ပန်းပန်း ပေ မယ့် ထမ်းပြု လှုပ်ရှား လုပ်ကိုင် နေ တယ်။ ရသမျှ ထင်းစည်း ဈေးမှာ သွားရောင်းတယ်။ သူ့ ဘဝ ဟာ လက်လှုပ်မှ ပါးစပ် စား၊ ထမင်း ဝ ရတဲ့ ဆင်းရဲသား ဘဝ သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဘိုးအို အတွက် အဝေဖန်စကား ဆိုနေစရာ မဟုတ်ဘူး ။ သူ ဖြစ်ရပ် ကို ဖြစ်ရပ် တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ် လို့သာ မြင်တယ်။ သူ ပုံမှန် အလုပ်လုပ် နေဆဲ၊ သူ့ အတွင်း သန္တာန် မှာ သူ့ နားလည်မှု နဲ့ သူ ချမ်းမြေ့နေ ဆဲ။
လဝက် လောက် ကြာတဲ့ နေ့ — ညနေခင်း အရောက်မှာ — မြင်းဖြူကြီး ရုတ်တရက် ပြန်ရောက် လာခဲ့တယ်။ စင်စစ် ဒီမြင်းက အခိုး ခံရတာ မဟုတ်ဘူး။ တောထဲ ဝင်သွား ခဲ့တာ သက်သက်။ အခု သူ ပြန်လာတော့ သူတစ်ကောင် တည်း မဟုတ်ဘူး။ သူနဲ့ အတူ မြင်းပေါင်း တစ် ဒါဇင် လောက် ပါလာတယ်။ ဒီအခါ ရွာသားတွေ လည်း ပြန် စုဝေးလာပြီး – “အဘိုးကြီး၊ ခင်ဗျား မှန်ပါတယ်။ ကျုပ် တို့ မှားသွား တယ်။ တကယ်က ဒါဟာ ကံဆိုး တာ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျား အတွက် ကံကောင်းတာ ပါပဲ။ ကျုပ်တို့ ဝေဖန်မိ ပြောမိ တာ တောင်းပန် ပါတယ်။”
အဲ့အခါ အဘိုးအို က – “ခင်ဗျားတို့ ပြောတာ များလွန်း နေပြီ။ သိပ် ရှည်ရှည် ဝေးဝေး မယူ လိုက် ကြပါနဲ့။ အခု မြင်း ပြန်ရောက် လာတယ် မလား — ပြန်လာတယ် ပဲ ပြောကြပါ။ သူနဲ့ အတူ မြင်းဆယ့်နှစ်ကောင် ပါလာတယ် – ဒါဆို ပါလာတယ် ပဲ ပြောကြပါ။ ဒါဟာ ကံကောင်း တာလား – ဒါမှမဟုတ် – ကံဆိုးတာလား ဘယ်သူ ဝေဖန် နိုင် မှာ တဲ့လဲ ။ ဘယ်သူ သိနိုင်မှာ တဲ့လဲ။ အခု အရာဟာ ကြုံဆုံ ရတဲ့ ဖြစ်ရပ် လေး တစ်ခု သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့လျောက် ဘာဖြစ်မယ် လို့ ဘယ်သူ အတိအကျ ပြောနိုင် ပါသလဲ။ ခင်ဗျားတို့ စာအုပ် တစ်အုပ် ဖတ် တယ် ဆိုပါစို့။ စာအုပ်တ စ်အုပ် လုံးမှဖြင့် မသိသေးဘဲ – တစ်မျက်နှာလောက် ဖတ်ပြီး ဘယ်လို သိမလဲ။ ခင်ဗျားတို့ အခု မြင် ရတာဟာ တစ်အုပ်လုံးထဲက – တစ်မျက်နှာ၊ တစ်မျက်နှာထဲကမှ စာတစ်ကြောင်းသာ ဖြစ်တယ်။ ဒီစာတစ်ကြောင်းကို ကြည့်ပြီး တစ်ခုလုံးကို ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လို ဝေဖန် မလဲ။ တကယ်တော့ အခု အဖြစ်ဟာ စာတစ်ကြောင်းစာ၊ စကားတစ်လုံးစာ တောင် ရှိမနေဘူး ရယ်။ ဘဝဆိုတာ ပြင်ကျယ်ကြီး တစ်ခုပါ။ ဒါကို အစိတ် အပိုင်းလေး ပဲ ကြည့်ပြီး ဝေဖန်မယ် ချက်ချင်း ဆုံးဖြတ် မယ် ဆိုရင် ဘယ်သူ အမှား ဖြစ်မလဲ။ ဒါ့ကြောင့် ကံကောင်းတယ် လို့လည်း မသုံး ပါနဲ့။ ဒါဟာ ကောင်းလား ဆိုး လား – ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူးရယ်။ ကျနော် ဘာမှ မဝေဖန်ဘူး ကိုယ့်လူတို့ – ရလာတဲ့ အတိုင်း လက်ခံထားတာ သက်သက်။ ဒါဟာ ကျနော့်ရဲ့ ကြည်လင်နေတဲ့ အဖြစ် သက်သက်။ အခြား ဝေဖန် တဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ တွေလည်း – စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ကြပါနဲ့။”
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ရွာသားတွေလည်း ဘာမှ ခွန်းတုံ့ စကား ဆိုမနေ ကြတော့ဘူးရယ်။ အဘိုးအိုရဲ့ စကားဟာ အမှန် ကို ပြော တာ ဖြစ် ကောင်း ဖြစ် မယ် – ဒါပေမယ့် စိတ် ထဲမှာ သိပ်လက်မခံ ဘူး။ ဘာလို့ဆို – အခု မြင်းကြီး ပြန်ရောက် လာတယ်- အခြား မြင်းတွေ လည်း ပါလာ တယ်။ ဒီထဲက နည်းနည်း ဖြစ်ဖြစ်ပဲ ခွဲဝေ ရောင်း လိုက်ဦး – ငွေစ ကြေးစ ရွှင်မယ်။ တင့်တောင်း တင့်တယ် နေနိုင်မှာပဲ – ဒါဟာ ကံကောင်းတာ မဟုတ် လို့ ဘာလဲ။ သူတို့ အတွေး ထဲမှာ ထင်ချင် သလို တွေးချင် သလို တွေးယူ ပြီး ဘာမှ မပြောဘဲ ပြန် သွားကြ တယ်။
အဘိုးအို မှာ သားငယ် တစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူ့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ သားငယ်လေး က ပါလာ တဲ့ မြင်းတွေ ကို ထိန်းကျောင်း ပေး ရတယ်။ ရက်သတ္တတစ်ပါတ် အကြာမှာတော့ – ကောင်လေး က မြင်းကျောင်း ရင်း- မြင်းတစ်ကောင် ပေါ် က ပြုတ် ကျတယ်။ ခြေကျိုးသွား တယ်။ ကုသ မရတော့ဘဲ – ဒုက္ခိတ ဘဝ ဖြစ်သွား ရတော့တယ်။ ဒီ တစ်ကြိမ် လည်း ရွာသားတွေ ပြန်စု လာပြန် တယ်။ ဟိုနား ဒီနားက လာသမျှ လူတွေ က ဒီ ဖြစ်ရပ် ကို ကြည့်ပြီး ထုံးစံ အတိုင်း ဝေဖန် ကြပြန်တယ်။ “အဘိုးကြီးရေ – ခင်ဗျား မှန်တယ် ဗျို့။ ဒါဟာ ကံကောင်း တာ လည်း မဟုတ်ဘူးဗျ — ခင်ဗျား အတွက် ကံဆိုးတာ။ အခု ဘယ့်နှယ် – ဒီသားလေး တစ်ဦး တည်း ရှိတာ -ဒီမြင်း တွေ ကြောင့် ဒုက္ခိတ ဖြစ်ရပြီ။ ခင်ဗျား ဒီ အသက် အရွယ် အိုကြီး အိုမ နဲ့ — အားကိုးစရာ၊ ချစ်စရာက ဒီသား မဟုတ်လား။ အခုတော့ ခင်ဗျား အားကိုးရ လောက်တဲ့ သားက ဒုက္ခိတ ဖြစ်သွားပြီ – ခင်ဗျား လောက် ကံဆိုး တဲ့ သူ ဘယ်သူ ရှိဦး မလဲ။”
အဲ့တော့ အဘိုးအို လည်း “ခင်ဗျား တို့ ဝေဖန်ပြီး ရင်းကို – ဝေဖန် နေကြပါလား။ ကိစ္စလေး တစ်ခု ကြည့်ပြီး ချက်ချင်း လိုလို ဆုံးဖြတ်ပြီး ရင်း ဆုံးဖြတ် နေကြတာပါလား။ ခင်ဗျား တို့ ပြောတာ များလွန်းနေပြီ ကိုယ့်လူတို့။ သိပ် ရှည်ရှည် ဝေးဝေး မယူလိုက် ကြပါနဲ့။ အခု ကျုပ် သား ခြေထောက်ကျိုးသွားတယ်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ် ? ဒါဆို ကျိုးသွား တယ် ပဲ ပြောပါ။ ဒါဟာ ဖြစ်ရပ် တစ်ခုပါ။ ကံကောင်း လား – ကံဆိုး လား – ဘယ်သူ ဆုံးဖြတ် နိုင်မှာ တဲ့လဲ။”
နောက် တစ်နှစ် လောက် ကြာ တဲ့ အခါ – အဘိုးအို နေတဲ့ တိုင်းပြည် ဟာ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ တစ်ခု နဲ့ စစ်ဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည် မြို့ရွာ အနှံ့ က အရွယ် ရောက်ပြီးသူ လူငယ် လူရွယ် တွေ အားလုံး မဝင် မနေရ အမိန့်နဲ့ စစ်တပ်ဖွဲ့၊ စစ်သားတွေ စုဆောင်း ကြတယ်။ အဲ့ အထဲ မှာ အဘိုးအိုရဲ့ သား ကတော့ ဒုက္ခိတ မို့ – စာရင်းထဲက ဖယ်ပြီး ကျန်ရစ် ခဲ့တယ်။ အဲ့အချိန် မှာ ရွာသူရွာသားတွေ စုဝေးပြီး ငိုကြွေး ပြော ဆို ကြပြန်တယ်။ ဘာလို့ဆို သူတို့ရဲ့ သားငယ်တွေ အားလုံး စစ်ထဲ ပါသွားကြရတယ်။ စစ်ပွဲ အခြေအနေ ကို ကြည့်ရင် လည်း တစ်ဘက် နိုင်ငံ ရဲ့ အင်အားနဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ အရ အရှုံး သာ ရှိတယ်။ သေဖို့ပဲ ရှိတယ်။ သေလမ်းကို သိသိနဲ့ – ဘုရင့် အမိန့်ကြောင့် သာ မရှောင်မလွှဲသာ ထည့်လိုက်ရတာမို့ – မိဘတွေ ဖြစ်သူ – ဒီရွာသားတွေ ဝမ်းပန်းတနည်း ဖြစ်ကြရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငိုကြွေး မြည်တမ်း ရင်း အဖိုးအို ကို ပြောကြပြန်တယ်။
“အဘိုးကြီး ဒီတစ်ခါလည်း ခင်ဗျား မှန်ပြန်ပြီ။ အမှန်ပါပဲ။ ခင်ဗျားဟာ ဘုရားသခင်လား တောင် မှတ်ရပါရဲ့။ အခု ခင်ဗျားသား ဒုက္ခိတ – ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား အနား မှာ ရှိနေနိုင်တယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ သားတွေ ကတော့ သွားကြရရှာပြီ။ သေဖို့ များတဲ့ လမ်းကို သွားကြရပြီ။ ခင်ဗျား ရဲ့ သားဟာ ဒုက္ခိတ မို့ ဆိုပေမယ့် ခင်ဗျားရဲ့ ရင်နှစ်သည်းချာ ရှင်သန်နေရက်သား – ခင်ဗျား ဘေးမှာ ထွေးပွေ့ နေနိုင်တယ်။ ကံကောင်း ရင် – တဖြည်းဖြည်း ကုသ နိုင်လို့ – လျောက်ရင်း လှမ်းရင်း – ပြန်ကောင်း ရင် ကောင်း လာနိုင်တယ်။ ခင်ဗျား အဖို့ ကံကောင်း ပါတယ် လေ။ ကျုပ်တို့ သားတွေ ကတော့ ……… “
အဖိုးအို လည်း ရွာသားတွေ အပေါ် ကြည်လင်တဲ့ အကြည့်နဲ့ ဂရုဏာ သက်သက် ကြည့်လိုက်ရင်း —
“ခင်ဗျား တို့တွေ နဲ့ ကျုပ် ဘယ်လို စကားပြောရမလဲ။ – အခု ကြည့်ပါ – တစ်ခုပြီး တစ်ခု – ဆက်ကာ ဆက်ကာ ခင်ဗျား တို့ ဝေဖန် ပြော ကြ တယ်။ ခု တစ်မျိုး ဖြစ် ရင်း – တော်ကြာ တစ်မျိုး ဖြစ်သွားရပြန်တယ်။ အခု ဖြစ်တဲ့ အရာဟာ ဖြစ်ရပ်လေး တစ်ခုပါ။ ခင်ဗျား တို့ ပြော တာ များလွန်း နေပြီ ကိုယ့်လူတို့။ သိပ်ရှည်ရှည် ဝေးဝေး မယူလိုက်ကြပါနဲ့။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဟာ ကောင်းတယ် – ဆိုး တယ် – ခင်ဗျား တို့ ဘယ် ပညာနဲ့ ဝေဖန် ကြသလဲ။ ဖြစ်ရပ်က ဖြစ်နေပါတယ်။ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်လာပါလိမ့် ဦးမယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဘယ် အသိ စိတ်၊ ဘယ် ဉာဏ် နဲ့ ဝေဖန် ကြပါသလဲ။”
~ Judge ye not: Osho
With the help of My Beloved, Ma Lin.
July 1st 2012 at 6:50 PM